एक्जिमा बच्चाहरु | डाउनलोडको लागि निःशुल्क रंगीन पृष्ठहरू
Atopic dermatitis को कारण
Atopic dermatitis को लागि आरामदायक उपाय
यो उठ्छ, तपाईं खरोंच। यो फेरि फेरि आयो, तपाईं अझै पनि खरोंच गर्नुहुन्छ। अन्ततः सबै कुरा घातक र खतरनाक हुन्छ। वयस्कों को लागी पहिले नै कठिन छ, बच्चाहरु मा लगभग असंभव छ: खरगोश रोक्न जब अष्टोपिक डेमेराटाइटिस मा यो अविश्वसनीय खुट्टा छ।
तर atopic एक्जिमा के छ?
सबै बच्चाहरु को 15% को आसपास यस बीमारी देखि प्रभावित हुन्छन्, वयस्कों लाई सामान्यतया कम सामान्य छ। Atopic dermatitis - पनि atopic एक्जिमा भनिन्छ - एक रश रूप मा, सूखी छाला संग जोडा, जो धेरै कुरा गर्दछ।
छोराछोरीमा एथोकिक एक्जिमा कसरी राख्ने
चाहे एक रोग उपस्थित छ, छाला मार्फत निर्धारण गर्न सकिन्छ। यदि कम से कम3मुख्य मापदण्ड र3सानो मापदण्ड भेटिएमा, एक रोग राम्रो सुनिन्छ। निस्सन्देह, कुनै पनि अवस्थामा, एक चिकित्सा व्यवसायको सल्लाह प्राप्त गर्नु पर्छ!
ठेठ वितरण (एल्बहरू, घुँडा, गर्दन, पेट)
एक atopic परिवार रोग (अस्थमा, एलर्जी, atopic dermatitis)
खरोंच पछि एक रातो छाला प्रतिक्रियाको सट्टामा सेतो छाला प्रतिक्रिया
ऊ ऊन कपडाको असक्षमता
निपल्स को आसपास वरिपरि वरिपरि
वर्तमान मा यस संसारको सबै रोगहरूको बारेमा सोच्न चाहानुहुन्छ - सबै ज्ञात रोगहरू भन्दा माथि - पूर्ण रूपमा प्रबुद्ध हुन। दुर्भाग्यवश धेरै मान्छेको पीडाको लागि यो छैन। उदाहरणार्थ, उदाहरणको लागि, एक जनावरको कपाल एलर्जी जसमा कसैले "तपाईंको बच्चा घोडामा एलर्जी हुन्छ"कारण सावधानीपूर्वक भेट्टाउन सकिन्छ।
एक यहाँ ट्रिगर र कारक प्रभावित को यहाँ बोल्छ, जो रोगी मा एक जोर ट्रिगर गर्न सक्छ। रोगको उपचार गर्न, यसले लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्दैन, तर पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारणले गर्दा समस्याहरू समाधान गर्नै पर्दछ।
र सम्भावित कारणहरूको सूची लामो र जटिल छ:
शरीरमा तनाव वा मनोवैज्ञानिक तनाव (उदाहरणार्थ अवसाद)
कुनै पनि फारम (जस्तै पशु बाल, पराग, घर धूल वा खाना एलर्जी) को एलर्जी
वातावरण (उदाहरणीय अत्यधिक चिसो वा सूखे)
निकास ग्यास जस्ता पर्यावरणीय प्रभावहरू
छालाको गलत लुगा
गर्भावस्था जस्तै हार्मोनल प्रभावहरू
तपाईंले केही उदाहरणहरूको आधारमा हेर्नुहुन्छ: सम्भावित कारणहरू गुणात्मक छन्। यहाँ उपयोगी छ "रोग डायरीनेतृत्व गर्न। तपाईंले जो गर्नुभयो, सावधानीपूर्वक लेख्नुहोस्, खाएका वा दिनहरूमा महसुस गर्नुहोला।
सानो संकेत: एक "रोग डायरी" पनि यस्तो मुर्ख जस्तै अन्य रोगहरूमा धेरै सहयोगी हुन सक्छ। यस आधारमा, यो कारण पनि यहाँ पत्ता लगाउन सम्भव छ। वास्तवमा के भयो भन्ने एउटा उदाहरण हो: आउनुहोस् हाम्रो व्यक्ति मारियोलाई बोल्नुहोस्। मारियो कहिलेकाहीं मुँहासे वा पिम्बुहरूबाट पीडित भए, तर अचानक तिनीहरू त्यहाँ थिए। अनि तिनीहरू टाढा गएनन्। कुनै कुरा माईनले प्रयास गरे कि हजुरआमाको घर उपचार, औषधि भण्डारका सामान्य उत्पादन वा औषधिबाट विशेष रकम किन्न सक्दछन् भने केही पनि मद्दत गरेन।
केहि बिंदु मा मारियो एक डायरी को लागी शुरू गर्यो, उनले के खाए, के गरे पछि उनको गतिविधिहरु र र। पछिको विश्लेषणमा, तिनले पत्ता लगाए कि उनले धेरै महिनाको लागि आफ्नो स्याण्डविचको नयाँ बेकरबाट प्राप्त गरेका थिए। अन्ततः मारियोले2हप्ताको लागि परीक्षण आधारमा बेकरलाई बचाए ... र कुन परिणाम थियो? दाँया, पम्प्लेटहरू पछि तिनीहरू पूर्णतया गायब भएको बेला फिर्ता गए। बेकरले केही घटक प्रयोग गर्नुपर्दछ जुन मारियोको शरीर एलर्जी थियो र परिणामस्वरूप, मुँहासे बनाइयो।
पहिले देखि नै वर्णन गरिएको, पहिलो चरण सफलतापूर्वक रोग संग लड्न को लागी कारण हटाउन हो। बिरामी बालबालिकाहरू सधैं धेरै माफी मागेका हुन्छन्, विशेष गरी यदि यो उनीहरूको आफ्नै बच्चा हो र यसले चिन्ता र खुट्टाको साथ स्क्रैप गर्दछ। कम से कम यो चिन्ता गर्न को लागि, हामीले5युक्तिहरु लाई एक साथ राखयो छ कि खुजली को दूर गर्न को लागि, साथ ही रश:
को रूप मा पारदर्शी को रूप मा यो लाग््छ: खरिद नगर्नुहोस्! यद्यपि यो वयस्कोंका लागि पहिले नै गाह्रो छ र बच्चाहरुका लागि सम्भवतः लगभग असंभव हुनेछ, खरोंच गर्दा धेरै छोटो समयको दुखाइलाई छुट्याउँछ, तर त्यसपछि एक ठूलो बूमेरंग प्रभाव संग फिर्ता आउँछ। एक वास्तविक चक्र चक्र!
सानो संकेत: अनावश्यक खरोंचबाट बचाउनको लागि, उदाहरणका लागि, रातमा हुँदा सुत्ने बेला, अनुहारको औंला काट्न र कतीको कपाललाई कचौरा लिन मद्दत गर्दछ।
कालो चाय लपेटो
अनावश्यक काले चिया रक्सी बनाउनुहोस् र प्रभावित क्षेत्रहरूमा राख्नुहोस्। ट्यानिनसहरूले एक सुरक्षात्मक तह विकास गर्दछ जसको माध्यमबाट छाला कम चिसो हुन्छ (सम्झनुहोस्, छाला सुक्नुहोस्!) र खुट्टा तदनुसार पछि जान्छ।
नियमित सिर्जना गर्दै
र एक प्राकृतिक क्रीम वा एक तेल संग। उदाहरणको लागि, मोरक्को आर्गन तेल यहाँ राम्रोसँग उपयुक्त छ। अर्गन तेल प्राकृतिक, खुब तेलको प्राकृतिक एंटीऑक्सिडेंट र भिटामिन ई को उच्च सामग्री संग छ, जसले खुट्टालाई रगत दिन्छ र छालाको महत्त्व नमी दिन्छ। अरुण तेलको बारेमा थप जानकारी ...
पहिले नै माथि उल्लिखित तनाव सम्भव हुन सक्छ। यस अवस्थामा, विश्राम अभ्यासले तपाईंको आफ्नै भलाइ बढाउन मद्दत गर्न सक्छ, र नतिजाको रूपमा, खुल्ला रिजर्व।
जब प्रवाह गर्दै, पानी नराम्रो नदिनुहोस्, किनकि यो छाला बाहिर निस्कन्छ। त्यसपछि छालाको सट्टा छाला सुकाइदिनु, तौलियासँग दाँत खाएर, छालामा अनावश्यक तनावबाट बच्न। छाला पुनः रमाइलो र क्रीम गर्न पछि यो यहाँ महत्त्वपूर्ण छ।
आफैलाई बर्डहाउस बनाउनुहोस् | बच्चाहरु संग टिंकर
बच्चाहरु संग सुगंधित बैग बनाओ
छोराछोरीलाई आफैसँग क्रेस हेड सिर्जना गर्नुहोस्